Fifidianana Amerikana: Sarah Palin Voafitaky Ny Sarkozy Sandoka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Mey 2018 5:47 GMT
Mpanentana roa tao amin'ny onjampeo Kebekoazy ao Montréal , ireo Mpitsara Miafin'endrika, no namitaka ilay Repoblikana Sarah Palin tamin'ny telefona, tamin'ny fisandohana ho Nicolas Sarkozy‘. Malaza be ireo Mpitsara Miafin'endrika ireo noho ny efa namitahany tamin'ny telefona ihany koa ny filoham-pirenena teo aloha Jacques Chirac, Britney Spears, Mick Jagger ary, eny, fa na dia ny Filoham-pirenena Sarkozy koa aza.
Azo henoina eo ambany ny resadresaka ary ahitàna lohahevitra isankarazany. Ireo fanantenan'i Palin mikasika ny fifidianana, ny fitiavany ny fomba famporisihan'ny Sarkozy ny politika frantsay, ny fihazàna, ary ireo vadin'izy ireo tsirairay avy.
Namaly i Richard Hétu avy any Kanadà:
Mba marina mafy, tsy hifarana haingana ny fampielezankevitra ho filoham-pirenena ho an'i Sarah Palin, izay voafitak'ireo Mpitsara Miafin'endrika, araka izay nahenoana azy tao anaty lahatsary. Nino ny fifampiresahana an-telefonina niaraka tamin'i Nicolas Sarkozy ny governoran'i Alaska, izay niresaka taminy momba an'i Johnny Haliday, “mpanolotsaina manokany”.
Tao anatin'ny faritra ho an'ny fanehoankevitra, Hadya tsy mbola nety nino foana fa hoe voafandrika tahaka io i Palin:
Ary io lantom-peo Frantsay tafahoatra io! Tena hanihany mihitsy! Saingy ahoana ary izy no voarebireby tahaka izany?
JimdeQuebec n'apprécie pas le genre d'humour des Vengeurs Masqués et trouve à Sarah Palin des circonstances atténuantes face aux remarques de plus en plus absurdes du comédien. Il est cependant consterné que Sarah Palin ne sache pas qui est le Premier ministre canadien : …………….Tsy mankasitra ny karazana sangisangy ataon'ireo Mpanao valifaty Misaron-tava ireo i JimdeQuebec ary hitany tao amin'i Sarah Palin ireo fisehoan-javatra mampidina azy manoloana an'ireo fanamarihana miha-adaladala ataon'ny mpanao hatsikana. Kanefa gaga izy fa tsy fantatr'i Sarah Palin akory izay Praiminisitra kanadiana:
Que Palin ne sache pas que le premier ministre du Canada est Stephen Harper me sidère! Bien sûr, je suppose que lorsque vous parlez à un président étranger d’un pays du G8 vous fermez votre gueule même devant les blagues de mauvais goût, spécialement si l’interlocuteur a un accent incompréhensible et que vous êtes plus ou moins sûr de tout saisir. ……………Fa tsy fantatr'i Palin fa i Stephan Harper anie no praiminisitr'i Kanada mampitolagaga ahy! Mazava ho azy, heveriko fa rehefa miresaka amina filoham-panjakana vahiny amin'ireo G8 ianao akombonao ny vavanao na dia manoloana an'ireo blaogera ratsy tsiro aza, indrindra raha toa manana feo tsy azo eritreretina ny olona hifampiresahana ary tsy dia azonao veroka loatra izay ambarany.
Julie Connan a bien noté que Sarah Palin se dit prête à se présenter à une prochaine élection présidentielle : ………..Nomarihan'i Julie Connan tsara fa milaza ho vonona hitranga i Sarah Palin amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy:
Milaza ho manana fahatokisana i Sarah Palin mialoha ny fifidianana hatao ny Talata sady faly amin'ireo tsapa hevitra mampiseho elanelana tery dia tery misy eo amin'ireo kandidà demokratika sy repoblikana. “Manantena anao ho filoham-pirenena ihany koa aho indray andro any”, hoy ilay mpanao hatsikana. “Angamba mety ho afaka valo taona any”, hoy ny navalin'i Sarah Palin azy miaraka amina tsiky kely.
Ilay toniziana blaogera, ALGY, nandefa lahatsoratra iray mikasika ilay fandraketana an'i Palin ho anaty rakitra sy fanadihadiana iray mikasika ny hevitra ijoroany:
Mila zavatra bebe kokoa mba handresena lahatra sy hambaboana an'ireo vehivavy mpifidy fa tsy ny fampiandaniana azy ireo aminà mpihaza orsa mirentirenty iray fotsiny, izy izay tsy ampy traikefa. Saingy, tena safidy iray ihany koa manakaiky ny fahadalàna io rehefa fantatra fa ireo mpiandany amin'ny vehivavy, ireo izay tena hinoana fa hifidy ho anà vehivavy iray noho ny antony ara-potokevitra, dia hanilika an'i Palin noho ireo fijoroany manohitra ny fanalànjaza.